यस क्रिसमसको लागि १० भिडियो ट्यूटोरियल जुन तपाईंले मिस गर्न सक्नुहुन्न क्रिएटिव अनलाइन
क्रिसमस प्रभावको उपयोग गर्नका लागि राम्रो समय हो। यी मितिहरूमा रचनाहरू, उदाहरण को लागी हेलोवीन मा पनि हुन्छ, मांग कला, रंग, प्रकाश, कल्पना र यही कारणले छवि, विज्ञापन दावी र बधाई को निर्माण गर्न एडोब फोटोशप वा इलस्ट्रेटर आवश्यक छ। त्यहाँ विकल्प र संभावनाहरूको एक ठूलो संख्या हो जुन हामी परिवर्तन गर्न सक्छौं हाम्रो अवधारणालाई भूमिबाट हटाउन। हामी हाम्रो परिदृश्यको फोटोमेनिपुलेशनमा वा सबै प्रकारका क्रिसमस मोटिफको साथ सजावटी रूपरेखामा हाम्रा पाठहरूको निजीकरणलाई प्रभाव पार्न सक्दछौं। आज म तपाईलाई ट्युटोरियलको रूपमा र भिडियो ढाँचामा दशवटा उदाहरणको चयन ल्याउनेछु ताकि तपाईले आफ्नो सीपलाई प्रशिक्षण दिन र यस बर्षको लागि आफ्नो कामको विकास गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाइँ यस क्रिसमसको लागि भिडियो ट्यूटोरियलहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, निश्चित रूपमा यी सिफारिस गरिएका छन्।
साथै, म तपाईंलाई सम्झना गराउँछ कि अघिल्लो वर्ष हामीले १०० भिडियोको साथ ठूलो संकलन गरे र म यो अवसरमा मौका लिन्छु कि तपाईं यसलाई पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट। यदि भिडियोहरू पहुँच गर्दा त्यहाँ कुनै समस्या छ भने, हामीलाई तलको सेक्सनमा टिप्पणी दिन नहिचकिचाउनुहोस्। उनीहरुको आनन्द लिनुहोस्!
कसरी एडोब फोटोशपमा क्रिसमस पोस्टकार्ड सिर्जना गर्ने
क्रिसमस पृष्ठभूमि डिजाइन गर्नुहोस्
फोटोशपको लागि क्रिसमस कार्य
एउटा सरल तरीकाले क्रिसमस कार्ड डिजाइन गर्नुहोस्
क्रिसमस पाठ प्रभाव (हल्का अक्षरहरू)
बत्तीहरू मार्फत अक्षरहरूको क्रिसमस प्रभाव
विभाजित क्रिसमस पत्र प्रभाव
क्रिसमसको लागि कलात्मक संरचना
एडोब फोटोशपमा फ्रिज प्रभाव
एडोब फोटोशपमा क्रिसमसको लागि रहस्यमय प्रभाव
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » Photoshop » यस क्रिसमसको लागि १० भिडियो ट्यूटोरियल जुन तपाईंले मिस गर्न सक्नुहुन्न
धन्यवाद फ्रान् :)
ट्रिपियोनलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई पेड्रो स्वागत छ, धेरै राम्रो काम। मेरी क्रिसमस!
marthi06 मारथी भन्यो
मेरो ट्यूटोरियल पोस्टिंग को लागी धेरै धेरै धन्यवाद!
Marthi06Marthi लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई स्वागत छ, छुट्टी छुट्टीहरु!
क्रिस PSTutorials भन्यो
मेरो ट्यूटोरियल साझाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ताकि यो अधिक व्यक्तिहरूमा पुग्छ! खुशीका छुट्टिहरु! ;)
Kris PSTutorials लाई जवाफ दिनुहोस्
Wacom ले बांस पेपरलाई विन्डोज १० मा एक सार्वभौमिक अनुप्रयोगको रूपमा ल्याउँदछ